မစ္စတာ ထရန့် ! ခင်ဗျား အတွက် ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ လုံလောက်ပါတယ် / ဗိုလ်မှူး ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
မစ္စတာ ထရန့် ! ခင်ဗျား အတွက် ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ လုံလောက်ပါတယ် / ဗိုလ်မှူး ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ
ဇူလိုငျ ၂၆, ၂၀၁၈ - ၈:၁၂ ညနေ News Code : 903169 Source : ABNA Link:
ဗိုလ်မှူး ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ အနေဖြင့် အမေရိကန် လက်ရှိသမ္မတ မစ္စတာ ထရန့် အား အီရန်ကို ထားလိုက်ပါအုန်း! လောလောဆယ် ခင်ဗျား နှင့်ယှဉ်ပြိုင် ဖို့ ကျုပ်ရှိနေပါတယ် လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
အဗ်နာ သတင်းဌာန၏ သတင်း အထောက်အထားအရ အီရန် နှင့် အီရတ် စစ်ပွဲ အတွင်း (ရမ်တွာန် ) ဆိုသည့် စစ်ဆင်ရေး တွင် ကျဆုံးသွားသည့် အာဇာနည် သူရဲကောင်းများ ကို တမ်းတ သတိရ သည့် အခမ်းအနား တစ်ခုကို အီရန် နိုင်ငံ ၏ ဟမ်ဒါန် မြို့ တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ထို အခမ်း အနားတွင် ကွတ်စ် တပ်မ ၏ ဗိုလ်မှူး ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ မှ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူး ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ မှ မိမိ၏ မိန့်ခွန်း အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ အီရန် နိုင်ငံ၏ သမ္မတ ၏မိန့်ခွန်း ကို အဖြေပေးသည့်အနေဖြင့် အမေရိကန် သမ္မတ မှ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ စကားတွေကို ဆိုခဲ့ပါ တယ်၊ အဲဒီ အဆင့်မရှိ စကားတွေကို အဖြေပြန် ပေးဖို့ အီရန်သမ္မတ ၏ အဆင့်အတန်း ဂုဏ် သိက္ခာ နှင့် မထိုက်တန်ပါဘူး ၊ဒါကြောင့် ကျနော် အီရန်နိုင်ငံ စနစ် ၏ တပ်သား တစ် ယောက် အနေ ဖြင့် အမေရိကန် သမ္မတ ကို အဖြေပေး သွားပါမယ်။
ဗိုလ်မှူးမှ ဆက်လက်ပြီး အမေရိကန် လက်ရှိသမ္မတ မစ္စတာ ထရန့် အား အီရန်ကို ထားလိုက်ပါ အုန်း! အီရန် စစ်တပ် အခု မလိုအပ်သေးပါဘူး ၊ လောလောဆယ် ခင်ဗျား နှင့်ယှဉ် ပြိုင်ဖို့ ကျုပ်ရှိ နေပါ တယ်၊ကွတ်စ် တပ်မ ဟာ ခင်ဗျား ကိုယှဉ်ပြိုင် ဖို့ ရှိပါတယ်၊ အရင်း ကျုပ် နဲ့ တိုက်ပါအုန်း ! ဟု ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ဗိုလ်မှူး ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ မှ အမေရိကန် အာဏာပိုင်များ ကို သတိပေးရင် ခင်ဗျားတို့တွေ မေ့သွားပြီးလား ? ခင်ဗျားတို့ တစ်ချိန် က တင့်ကားတွေပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး မိမိတို့၏ တပ်သားတွေ အတွက် အထုပ်ကြီးတွေ ပြင်ပေးခဲ့တယ်၊ ဒီနေ့ ခင်ဗျား အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားချောက်လှန့် ကြိမ်းမောင်း ဖို့ ကြိုးစားနေလား ? ခင်ဗျားတို့ လက်ဘနွန် နဲ့ ၃၃ ရက် တာ တိုက်ပွဲမှာ ဘာများ လုပ်နိုင်ခဲ့လို့လဲဗျား ? အဲအချိန်တုန်းက စစ်ပြေငြိမ်းဖို့ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် အဖွဲ့၏ စည်းမျည်းများ ခင်ဗျားတို့ မလိုက်နာခဲ့ကြ ဘူးလား?
ဗိုလ်မှူးမှဆက်လက်ပြီး အမေရိကန် အာဏာပိုင်များကိုမေးခွန်းထုတ်လေ၏။ ယနေ့ချိန်ထိ ခင်ဗျား တို့တွေ ကျုပ်တို့ကို ဘာများ လုပ်နိုင်ခဲ့လိုတုန်း … ဒီနေ့လာပြီး ချောက်လှန့် ကြိမ်းမောင်း နေရအောင် !?
ကွတ်စ်တပ်မ၏ ဗိုလ်မှူး အနေဖြင့် ဆက်လက်ပြီး မစ္စတာ ထရန့် !ခင်ဗျား အနေဖြင့် မိမိစစ်တပ်၏ ဗိုလ်မှူးဟောင်းကိုမေးကြည့်ပါ၊သူအနေနဲ့ ကျုပ်ဆီကို ဘယ်သူကို လွတ်လိုက်လည်းလို့ ဒါတောင် ကျုပ် အီရန်သမ္မတ မဟုတ်ဘူးနော် အီရန် စစ်သားတစ်ဦးသာ ဖြစ်တယ်၊လွတ်လိုက်တဲ့သူ ကျုပ်ဆီလာပြီး အမေရိကန် စစ်တပ် လာမည့် လအနည်းငယ်အတွင်း အီရတ် မြေမှ မထွက်မချင်း အီရတ် တော်လှန်ရေး သမားများကို မတိုက်ဖို့ ဆိုင်းငံ့ပေးဖို့ မေတ္တာ မရပ်ခံခဲ့ဘူးလားဆိုတာ မေးကြည့်ပါ ? ခင်ဗျား အီရတ်မှာ မိမိ သြဇာ အာဏာ ကိုသုံးပြီး အီရတ်နိုင်ငံသားတွေ ကို ကျေနပ် အောင်လုပ်ပေး နိုင်ခဲ့လိုလား ?
ဆက်လက်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံအနေဖြင့် တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အားနည်း မှု တွင် သာတိုး နေ ကြောင်း ပြောကြားရင်း တစ်ခေတ်တစ်ခါကဆိုရင် အမေရိကန် ရေတပ်သဘောင်္ ဟာ မိမိနေရာကနေ လှုပ်ရှား လိုက်တာ နှင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ဖြုတ်ချသွား ခဲ့ရပါတယ်။ ယနေ့ အမေရိကန် အနေဖြင့် တာလီဘန် လို အဆင့်မရှိ အောက်တန်းကျသည့် အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ တောင် စကားပြောပြီး ညှိနှိုင်းနေရ တဲ့အခြေ အနေ ရောက် နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အီရန်ကို ဆုံးရှုံး အောင်ပြုဖို့ အီရန် အမှိုက်တောင်း ထဲ ပစ်ထားပြီး ဖြစ်တဲ့ ကမ်အိုကေ အကြမ်း ဖက် အုပ်စု ကို အထောက်အကူပြုနေတယ်။
ဗိုလ်မှူး ကာစင် ဆိုလိုင်းမာနီ မှ ဆက်လက်ပြီး ကျနော် အနေဖြင့် လောင်းကစားသမား ထရန့်ကို ပြောချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျား စဉ်းစားလို့တောင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး ၊ကျုပ်ခင်ဗျားအနီးမှာ ရှိနေတယ်။ ခင်ဗျား စဉ်းစား လို့ မရောက်နိုင်တဲ့နေရာ မှာ ကျုပ် ခင်ဗျား အနီးမှာရှိ နေတယ်။
အီရန်တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ် ၏ ဗိုလ်မှူး အနေဖြင့် အမေရိကန် ဘက်မှာ ဆက်တိုက် လာနေသည့်ချောက်လှန့်မှု ကြိမ်းမောင်း မှုများကို အဖြေပေး၍ အမေရိကန် အနေဖြင့် အီရန် ကိုဆန့်ကျင်ပြီး တိုးစစ်ဆင်၍ စတိုက်လာမည်ဆိုလျှင် စတိုက်မှုသာ အမေရိကန် လက်တွင် ရှိမည်ဖြစ်ပြီး စစ် အဆုံးသတ်မှု သည် အမေရိကန်လက်မှာ ရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။